यो मन त मेरो नेपाली हो ! « रिपोर्टर्स नेपाल
यो मन त मेरो नेपाली हो !
अजवी पौड्याल : काठमाण्डौं, बैशाख २६। वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा वीरेन्द्र झाको ६ जनाको परिवारै कोरोना लागेर घरमै आइसोलेसनमा थियो। बाहिरबाट मान्छे बोलाउन नमिल्ने। आफन्त, छरछिमेकी आउने कुरा पनि भएन। खाना बनाउनै असहज अवस्था थियो। त्यही बेला डा झालाई फोन आयो। रवि सिंहले फोन गरेका रहेछन्।
सिंहले ललितपुरमा मित्रां दा ढावा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका छन्। ५० जनालाई एकैपटक खाना खुवाउने क्षमता रहेको उक्त रेस्टुरेन्ट ग्राहकलाई अहिले बन्द छ। तर, कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरूका लागि भान्साघर बनिरहेको छ। सिंहले निषेधाज्ञा अवधिमा समस्यामा परेका मजदुर मात्रै होइन, अरुलाई पनि साँझ–बिहान आफ्नै गाडीमा राखेर खाना पुर्‍याउने गरेका छन्। निःशुल्क।
रविका बाबु–आमा राजा महेन्द्रका पालामा भारतबाट नेपाल आए। काठमाडौंमा व्यापार गरे। रेस्टुरेन्ट चलाए। यताकै रैथाने भए। रवि यतै रमाए। ढिला नेपाली नागरिकता पाए। परिवारका आधाजसो सदस्य भने अझै नेपाली बन्न सकेका छैनन्।
कोरोना संक्रमणले अप्ठ्यारो परेका ढोकामा अचेल उनै रविको गाडी हर्न बजाउँदै पुग्छ। खाना छाड्छ। र, अर्का संक्रमितकहाँ खाना पुर्‍याउन हतारिएर हुइँकिन्छ। भारतीय मूलका भए पनि उनलाई अब नेपालै आफ्नो लाग्छ। भन्छन्, ‘मलाई यही देशले माया दियो। यहींको माटोमा कर्म गरें। फल पाएँ। जे–जति छ, यहींको छ।’
सिंहले कामदारलाई रेस्टुरेन्टमै आइसोलेसनमा राखेका छन्। सामान्य अवस्थामा ११ जना स्टाफ राखेर सञ्चालन भइरहेको ढावा अहिले चार जनाले चलाएका छन्। टिम मिलाएर पालैपालो काम गर्छन्। उनीहरूसँगै मिलेर आफैं खाना बनाउने गर्छन् सिंह।
सिंह खाना बनाउनुअघि बिरामीलाई मेनु ह्वाट्सएपमा पठाउँछन्। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अन्य रोगका बिरामीले रोजेअनुसारको खाना मात्रै पुर्‍याउने गर्छन्। मासु चल्नेलाई त्यहीअनुसार, शाकाहारीलाई त्यहीअनुसार तयार पार्छन्। कोही खाना खान नसक्ने हुन्छन् उनीहरू सुप मगाउँछन्। उनीहरूलाई सुप मात्रै प्याक गरेर पुराइदिन्छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
नोट : यसअघि यो समाचारमा अन्नपूर्ण पोष्टका रिपोर्टर अजवी पौड्यालको नाम छुटेको थियो । अहिले सच्याईएको छ ।